Portal:Saynis - Wikipedia
... in dhuunta Geriga ka koobanyahay dhowr qalfoof le'eg tirada lafaha Dhuunta dadka?
... in kaan ugu weyn Lamadegaan caalamka uu yahay Lamadegaanka Saxara ee woqooyiga Afrika?
... in Baryonyx (ee sawirka) waxaa lagu tilmaamaa kii ugu horreeyay Diinosoor oo ay aqoonyahanada ay sheegeen in ay tahay (kaluun cune)?
... in tubta ama marinka Docay iyo Buluuto ay iska gooyaan laakiin natiijada waqtiga ay u baahanyihiin dhammaystirka wareega ay ku wareegayaan qorraxda waxaan dhici karin in ay isku dhacaan xitaa mustaqbalka fog?
... in dagaalkii ugu taariikhda dheeraa uu ahaa dagaalkii saddexboqol iyo soddon iyo shan sano ee aan la adeegsan wax rasaas ah kaasoo ka dhigan dagaalkii ugu dheeraa taariikhda uguna khasaara yaraa dhanka nafta?
Leeb iyo Qaanso
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 24 Juun 2017, marka ee eheed 07:41.